Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation Xenoglossy an'i Jenson Jacoby | TE lasa fiainana taloha dia mitoetra ao anaty fanahy - fikarohana Reincarnation
Article amin'ny Walter Semkiw, MD, from Teraka indray: tranga tany am-boalohany nateraky ny porofo momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny raharaha Xenoglossy notadiavin'i Ian Stevenson
Eo ambanin'ny hypnosis na famerenana ny fiainana taloha dia manomboka miteny soedoà ny vadin'ny dokotera
Anisan'izany ny dokotera iray izay nanao fanafody tany Philadelphie, Pennsylvanie, sy ny vadiny. Rehefa naniry ny hitazona ny maha izy azy manokana io dokotera io, dia nanadihady an'io tranga io i Ian Stevenson amin'ny fampiasana ny pseudonyms ho an'ireo mpivady. Stevenson dia nanondro ny mpivady KE, ilay dokotera ary TE, ny vadiny. Hatramin'ny nampiasana ny loharanom-baovao dia sarotra ny mahatsiaro hoe iza no iza, dia homeko anarana voalohany izy ireo ho tsotra. NY dia antsoina hoe Ken sy ny vadiny, TE, dia antsoina hoe Tania.
Ankoatra ny fampiharana fanafody mahazatra, dia nianatra nanao hypnosis tao amin'ny 1954 i Ken ary hampihatra ny vadiny. Nahita an'i Tania ho toy ny lohahevitry ny hypnosis i Ken.
Tao amin'ny fivoriana natao tamin'ny 1955 ka hatramin'ny 1956, raha niharan'ny hypnosis i Tania, dia nisy olona nahay niteny Swedish, fiteny izay tsy fantatr'i Tania na Ken. Noho izany dia miteraka tranganà xenoglossy izany, izay ahafahan'ny olona iray miteny fiteny izay tsy nianatra tamin'ny fomba mahazatra.
Teraka tany Philadelphia i Tania ary noho izany, ny teny anglisy dia ny fitenin-drazany. Teraka tany Odessa, Rosia ny ray aman-dreniny, izay Jiosy. Tsy nisy na dia iray aza tany Scandinavia tany amin'ny fianakaviana hatramin'izay ary tsy nahay namaky teny soedoà.
Ian Stevenson Validates an'ny Xenoglossy an'i Tania: Fitsapana ny mpitsikera lainga nampiasaina tamin'ity raharaha Reincarnation ity
Ian Stevenson, araka ny mahazatra, dia nianatra ity raharaha ity tamin'ny antsipiriany. Nanana teny malefaka fanta-daza izy nanamafy fa ny tenimiafin'i Tania dia tena teny soedoà tokoa. Ao anatin'ireo fanambarana ireo dia voamarika fa ny fitenenana dia an'ny mpandahateny Soedoà voajanahary.
Stevenson koa dia nanana ny dikany sy ny horonan-tsarimihetsika nanadihady ny manam-pahaizana manokana momba ny teny anglisy, izay nanamafy fa niteny tamina fiteny Soeda i Tania. Ireo manam-pahaizana ireo koa dia nanamarina fa ny teny soedoà tena tsara dia nitenenana ary ny fiteny dia endrika alemà taloha, fantatra amin'ny anarana hoe soedoà Middle. Nosoratan'i Stevenson ny teny voambolan'ny teny swaziliniana 100 avy amin'i Tania.
Ankoatra izany, Ian Stevenson dia nizara ny teti-pikarakarana poligrafy na lainga momba ny fametavetana i Ken sy i Tania mba hamoaka ny hosoka, izay nandalovany. Nofintinin'i Stevenson fa tranganà valinteny xenoglossy tena izy io, izay ahafahan'i Tania miresaka amin'ny teny soedoà.
Ny fiainana taloha dia nipoitra i Jensen Jacoby ary nilaza fa roahina any anaty rano sy hikapoka eo an-doha
Tao amin'ny hypnose voalohany tao Tania na ny fiverenana an-dalàm-piainana teo aloha, dia niverina indray izy nandritra ny androm-piainany, izay nahatonga azy sy ny vondron'olona tranainy ho voan'ny rano. Nieritreritra i Tania fa voatifitra teo amin'ny lohany izy ary nijaly mafy tamin'ny lohany. Noho ny fijaliany mahatsikaiky, dia nalain'i Ken an'i Tania tamin'ny toeran'ny fihoaram-pefy. Na izany aza dia nahatsapa fanaintainana i Tania nandritra ny roa andro taorian'izay ary nahatsiaro imbetsaka ny lohany, nitady vongana.
Nandritra ny fotoam-bavaka taorian'izay dia nilaza tamin'i Tania i Ken fa tokony hiverina folo taona mialoha ny fizarana ilay izy. Tina avy eo dia niteny tamin'ny teny anglisy, tamin'ny feo malefaka lalina hoe: "Lehilahy aho." Ny endriky ny tononkira lalina dia nanambara fa Jenson Jacoby no anarany ary mpamboly izy. (1)
Tamin'ny fivoriana valo izay natao teo anelanelan'ny 1955 sy 1956 dia niseho i Jenson Jacoby. Nandritra ireo fivoriana dimy voalohany dia azony tsara sy valiny tamin'ny teny Anglisy, fa ny Anglisy nijanona ary dia niresaka tamin'ny teny malefaka marevaka. Afaka miteny sy mahatakatra an'i Norveziana ihany koa i Jenson. Tao amin'ny fivoriana 6 tamin'ny 8, Jenson ihany no niteny Swedish. Tsy nahatsiaro ny zava-nitranga tamin'ny fotoam-pitsapana hypnosis i Tina rehefa niseho i Jensen.
Any amin'ny morontsirak'i Suède, ny fiainam-piainana taloha Jenson Jacoby dia nanangana fiompiana, mihinana salmona sy orza mihaza
Nanazava i Jenson fa nonina tao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Morby Hagar, izay akaikin'ny tanàna misy seranana antsoina hoe Havero. Nisy tanàna iray hafa nantsoina hoe Torohaven. Miteny i Jensen fa nanangana ombivavy, soavaly, osy sy akoho izy. Nanao mofo izy ary nanamboatra zanak'osy. Nilaza i Jenson fa haka ny vokatra hivarotra any Havero, tanàna misy seranan-tsambo izy. Indraindray dia nihinan-kena ny fianakaviany, izay mety ho avy tao an-tanàna.
Nilaza i Jenson fa iray tamin'ireo telo lahy izy. Nanan-janaka vavy izy, izay namorona mofo mofomamy sy mofomamy mafana. Tsy nanan-janaka ireo mpivady ireo. Nilaza i Jenson fa nanangana trano fonenany izy, ary nihaza bara izy ary te-hisotro tao amin'ny toeram-pandraharahana. Nanaiky i Jenson fa nivavaka tamin'i Jesosy Kristy izy.
Ny fiainan'ny olona taloha taloha Jenson Does Impersonations
Nandritra ny fotoam-pivoriana iray, Jensen, miteny soedoà, dia nanao fomban-drazana mampihomehy ny lehilahy iray mamo ao amin'ny tranom-bahiny miezaka mihira. Niseho fihetseham-po mahery vaika ihany koa i Jenson rehefa naseho sarin-tsoavaly iray izy, tahaka ny nampahatsiahivany azy tany an-trano.
Xenoglossy: Mahalala ny teny Soeda i Jenson, anisan'izany ny Skuta
Fantatr'i Jenson tamin'ny teny soedoà tamin'ny taonjato lasa teo. Ohatra, rehefa nampiseho ny sambo sambo sambo tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, dia nantsoin'i Jenson hoe "skuta" na "skute" izy io. Nantsoiny koa hoe fitahirizana soedoà nampiasaina handrefesana voa. Rehefa nasehony ny sarin'ny amboadia, dia nanonona azy tamin'ny teny soedoà izy.
Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa nampiseho fitaovana maoderina, toy ny paingo roa, i Jenson dia tsy afaka nanonona izany.
Ny fiainana taloha nataon'i Jenson dia nankahalaina tamin'ny ady sy ny rosiana
I Jenson dia namaritra fankahalana ny ady sy ny tahotra ny Rosiana. Rehefa nanontaniana ny fiafaràn'ny androm-piainany i Jenson, dia nilaza fa niady tamin'ny fahavalo izy, voatery niditra tao anaty rano iray ary nokapohina tamin'ny lohany, izay toa namono azy.
Izany fanambarana izany dia mifanaraka amin'ny fahatsiarovan'ny tantaran'i Tania fony izy nogadraina voalohany tao amin'ny hypnosis, ary koa ny aretin'andoha taorin 'izany, izay nanao ny fikarohana ny vongan-doha teo amin'ny lohany.
Ian Stevenson, nino tanteraka ny maha-ara-dalàna ny raharaha Jenson Jacoby | TE. Manamarika izy fa ny dokotera izay nitarika ny fivoriana hypnosis tamin'ny vadiny, KE, izay nantsoinay hoe Ken, dia tsy nitady dokambarotra ho an'ilay raharaha. Niorina tamin'ny fanandramana polegrama sy ny fahalalàny ireo mpivady voarohirohy, nolavin'i Stevenson fa nisy ny hosoka noraisina.
Stevenson dia namintina fa Jenson Jacoby dia nipetraka tany amin'ny morontsiraka andrefan'i Soeda, akaikin'i Norvezy, tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Gothenburg no tanàna lehibe indrindra eto amin'ity faritra ity. Apetraho eo amin'ny sarintany ny cursor mba hanitarana azy io sy ny fanalahidin-tserasera mba hivezivezy sy hidina.
Raha toa i Tania, na TE, dia tsy nahatsiaro ny zava-nitranga rehefa niseho i Jensen, dia nanontany i Stevenson raha toa ka manaporofo izany ny toe-java-niseho na teraka tamin'ny vatana vaovao. Na izany na tsy izany, dia nanambara i Stevenson fa ny tranga dia maneho porofo matanjaka ho an'ny fahaleovan-tena taorian'ny fahafatesana.
Tsapan'i Stevenson fa mety ho ny fanazavana kokoa momba ny fanambadiana indray ny vatana vaovao. Ho fiarovana an'io toerana io, dia nametraka izao fanontaniana manaraka izao izy:
Raha Jenson dia toe-tsaina manjavozavo, nahoana no miseho any Philadelphie ao 1955 ny toe-tsaina kristianina sy sedanina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo an'i Jenson Jacoby, niteny tamin'ny vehivavy jiosy iray avy amin'ny teny Rosiana?
Xenoglossy: Jenson ihany no niteny Swedish, fiteny izay tsy nianarany na tsy azon'i Tania.
Fiovan'ny Fivavahana sy ny Nationality: Jenson dia Kristianina Soedoà izay natahotra ny Rosiana, raha Jiosy kosa i Tania ary lovan'ny Rosiana.
Ny fanahiana dia mitoetra hatrany: Tonga namakivaky an'i Tania i Jenson toy ny hoe mihitsoka ara-potoana izy, tsy fantany fa maty izy na manana fisiana hafa i Tania. Raha izany dia hita fa ny toetran'i Jenson dia voatana ao anaty ny fanahy.
Ireo tranga hafa xenoglossy izay mampiseho amin'ny fomba mampihetsi-po an'io tranga io dia ahitana ny Sharada | Raharaha Uttara Huddar ary ny Gretchen | Dolores Jay raharaha.
Fanamarihana hoan'ny mpamaky: Ian Stevenson. MD dia Profesoran'ny Psychiatrie ao amin'ny Oniversiten'i Virginia izay nanoratra tamina karazana akademika tena izy, satria mpahay siansa ny mpihaino azy. Ao amin'ny tranokalan'ny IISIS, ny tranga momba ny fiainany taloha dia aseho amin'ny ny tantaram-pianakaviana fahiny-tantara momba ny fanambadiana mba hanamora ny fahatakarany ny asany akademika. Ho an'ireo izay liana amin'ny fankasitrahana ny fikarohana ara-tsiansa, toy ny fampiasany vavolombelona marobe mba hametrahana fijoroana vavolombelona voamarina, azafady, azafady ny tatitra voalazan'ny Dr. Ian Stevenson.
1. Stevenson, Ian: Xenoglossy: Famerenana sy Tatitra momba ny raharaha, 1976, pejy 26